Asphalt 9 Halyeeyo, ciyaar aadan ku dhaafin karin Mac | Waxaan ka socdaa mac
Asphalt 9 Halyeeyada, ciyaar aadan ku seegi karin Mac-gaaga
Waa run in inteena badani aanan haysan waqti badan oo aan ku ciyaarno markaan soo hor marno Mac-ga, laakiin waqti ka waqti ayaan qabsanaa iyo ciyaaro sida Asphalt 9 Halyeeyada kama maqnaan karaan Mac-gaaga daqiiqado gaar ah haddii aad jeceshahay ciyaaraha baabuurta.
Waxaan horey uga soo hadalnay kulankaan tartanka dhowr jeer. Asphalt-kaani waa bilaash oo waa la soo dejisan karaa waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku ciyaarno tartamada qaar waqti ku habboon haddii aanan dooneyn inaan lacag ku bixino, sidoo kale waa ciyaar aad u fiican marka la eego tayada garaafka iyo heerka madadaalada.
Hadda oo aan ku jirno taariikho iid ah dad badan waxaan uga takhalusi karnaa cayayaanka tartan iyo Asphalt 9 Legends ayaa noqon kara xulashada ugu fiican ee kuwa badan. Tani maahan ciyaar jilid dhab ah Waa wax badan oo ka mid ah ciyaarta arcade, sidaas darteed madadaalo ayaa lagu damaanad qaadayaa iyada sidoo kale dareenka xawaaraha ayaa runtii wanaagsan.
Waanu ciyaari karnaa xoogaa ka dibna waanu joojin karnaa, laakiin haddii aad ka mid tahay kuwa ku xidhan ciyaarta noocan ah waad heli kartaa iibsiyada ay bixiso oo waxaad heli kartaa waqti dheeri ah oo ciyaarta ah, tartamo badan, baabuur badan, wax walba oo badan. Ciyaartu waxay leedahay wax iibsasho isku dhafan inkasta oo aan loo baahnayn in lagu bixiyo lacagta si loogu ciyaaro, haddana waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la dheereeyo xiisaha helitaanka baatroolka iyo kuwa kale. Sikastaba sidii ciyaar waqtigeedii ku socota runtii waa madadaalo.
El Asphalt 9 Legends waa cabirkeedu yahay 2,6 GB markaa waxaad u baahan tahay booskaas ama in ka badan oo ku saabsan diskigaaga si aad u rakibto
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Asphalt 9 Halyeeyada, ciyaar aadan ku seegi karin Mac-gaaga
Ku cusub Mac? Tilmaamahan yar ayaa wax badan kaa caawin doona
AirTag, Xaqiiqada Dareenka leh, Dhagaha, iyo inbadan. Apple ee 2021 sida uu qabo Kuo